Key Account ( For Sale Department) | Job in Myanmar ﻿
31.7.2020, Full time , Beauty / Cosmetics
•	Male (or) Female.
•	တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
•	အသက် (၂၃) နှစ်မှ (၃၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	အလှကုန်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။
•	စကားအပြောအဆိုချိုသာသူ ၊ သွက်လက်ချက်ချာပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ကုမ္ပဏီနှင့်ရေရှည်လက်တွဲ၍ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
261 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
262 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
324 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
355 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
356 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
Key Account ( For Sale Department) Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Thiri Cosmetic Co., Ltd. Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Beauty / Cosmetic Jobs in Myanmar, jobs in Yangon